LR41: dzidza zvakawanda nezve aya maseru kana mabhatiri | Mahara emahara
LR41: dzidza zvakawanda nezve aya mabhatiri
Isaac | 05/10/2021 08:39 | Zvemagetsi zvigadzirwa
Mumusika kune huwandu hukuru hwe mabhatiri ane magetsi akasiyana, kugona, uye nemhando zhinji. Imwe neimwe yakanangana nerumwe rudzi rwemudziyo. Takatoongorora imwe yacho munguva yakapfuura, sezvairi iyo CR2032. Zvino, muchinyorwa chino, tichaongorora "hanzvadzi" yeizvi, sezvazviri iyo LR41, iyo zvakare ndeyeyaanonzi mabhatiri ebhatani.
Hunhu hwayo hunoita kuti ive yakanaka kune mamwe marudzi e mafomu uko kukura uye kureba kwakakosha, uye nesimba rinoda kwete rakakwira semamwe madhivhisi mahombe ...
1 Chii chinonzi LR41 bhatiri?
1.1 Kwokutenga LR41 mabhatiri
2 Zvimwe nezve mabhatiri
2.1 Mhando dzebhatiri
Chii chinonzi LR41 bhatiri?
La bhatiri kana LR41 bhatiri iyo mhando yebhatiri mumhuri yebhatani. Iyo zvakare inoonekwa sealkaline uye isingadzorekezve. Magetsi acho i1.5 volts, aine saizi diki yezvigadzirwa zvemagetsi zvinoda simba shoma, senge mawatch, laser pointers, macalculator, uye zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi.
Nezve kuumbwa kwemasero avo, mhando iyi yemabhatiri anoshandisa makemikari akasiyana nekuda kwekunakidzwa kwayo. Nesimbi yekunze yekukochekera ine danda rakanaka chikamu chakati sandara uko kunowanzo kuve nezvinyorwa, nechiso chakatarisana chiri danda risina kunaka. Kana iri nguva yacho, vanogona kusvika pamakore matatu mukuchengetedza.
Kwokutenga LR41 mabhatiri
Unogona kuwana aya marudzi emabhatiri muzvitoro zvakati wandei, kunyangwe zvisiri nyore kuwana senge rudzi A, idzo dzinozivikanwa. Zvisinei, pamapuratifomu akaita seAmazon iwe unogona buy pachikamu kana mumapakeji:
Maxell pack yemabhatiri gumi mhando LR10
Camelion pack yezvikamu zviviri LR2
Duracell 376/377 LR41 yuniti
Zvimwe nezve mabhatiri
Inofanira kuva kusiyanisa pakati pebhatiri nebhatiri, kunyangwe kazhinji mazwi ese ari maviri achishandiswa zvisina basa (chikonzero izita rekuti bhatiri muChirungu, rinova rakajeka uye rinoshandira ese ari maviri), kana iwe uchida kuva akaomarara, unogona kuita zvinotevera:
Battery: bhatiri rinogona kudzosera kwachaja kwaro kana magetsi aripiwa, ndiko kuti, hapana mabhatiri asingadzorekezve. Uye zvakare, ivo vanotambura nekuzviburitsa mumazuva kana mwedzi apo ivo vasiri kushandiswa.
Pila: inoitika isingachinjiki maitiro, uye kana achinge atorwa pasi haakwanise kudzoreredzwa. Pane kudaro, dzinogona kuchengetwa kwemakore pasina kukosha kwekuzviburitsa.
Matura anogona kukamurwa kuva mhuri mbiri huru, uye mukati mavo ivo vanogona zvakare kuenderera mberi vachiiswa mukati merudzi uye hunhu:
ari mabhatiri asingadzoreke havafanirwe kuyedzwa kurodha, sezvo vachigona kukuvara, ivo havana kuitirwa izvo. Izvo zvakagadzirirwa kushandiswa kamwe chete. Mukati meiri boka mune:
Cylindrical: ndiwo anonyanya kufarirwa, uye iwo aunogona kuwana mumawachi emadziro, maremote control, nezvimwe. Pakati pazvo pane:
Alkaline: zvakajairika nhasi. Izvo zvinoumbwa ne zinc seayo anode uye manganese dioxide seye cathode. Rudzi urwu rwebhatiri runogara kwenguva refu, uye runofanirwa kuchengetwa panosvika 25ºC kana zvishoma pasi pekuchengetedza kwakakodzera. Zvinoenderana nehukuru hwacho, kune maAA (LR6), AAA (LR03), AAAA (LR61), C (LR14), D (LR20), N (LR1) uye A23 (8LR932), ese ari 1.5 volts uye nehukuru hwakasiyana , kunze kwekupedzisira iri 12V.
Salinas: Aya mabhatiri ane zinc-kabhoni, uye ari kuramba achishandiswa nekuda kwesimba ravo rakaderera uye nehurefu zvichienzaniswa nealkaline. Iwe zvakare uchawana iwo akafanana mhando, senge AA, AAA, AAAA, nezvimwe, asi ivo vane akasiyana IEC uye ANSI kodhi.
Lithium: Dzinosanganisira lithiamu mune yavo dhizaini, uye panogona kuve nemhando dzinoverengeka dzakadzika kwazvo kuzvidzora, ye1% chete pagore. Uye zvakare, vane yakakura kwazvo nzvimbo yekushanda, kubva -30ºC kusvika 70ºC. Mukati iwe unogona kuwana iron ne lithiamu disulfide, senge 1.5v AA kana AAA, 3.6v lithium-thionyl colouro, 3v lithium manganese dioxide ...
Rectangular: Seizvo zita ravo rinoratidzira, iwo akaenzana emakona akaumbwa mabhatiri, akasiyana neaya emakona. Munguva yakapfuura ivo vaive vakanyanya kufarirwa, kunyangwe nhasi vasiri kushandiswa zvakanyanya nekuda kwehukuru hwavo. Mune izvi, voltages pamusoro pe4.5v inogona kusvika.
Alkaline: ayo anozivikanwa seRRs anogona kubva pa4.5v yebhatiri pack kana 3LR12, kusvika 9v yeiyo PP3 (6LR61), kuburikidza ne6v yetochi yetochi (4LR25).
Salinas: Sezvakaita neyesirinda, ivo vakawirawo mukusashandiswa uye hazviwanzo kushandiswa, chete kune chaiwo mafomu ekushandisa uko vangangowana mukana kune iwo alkaline. Iwe unowana vakomana vakaita saPP6 uye PP9 ...
Lithium: Kune zvakare mativi lithiamu mabhatiri, kazhinji aine lithium thionyl chloride kana lithium manganese dioxide. Ose ari mapfumbamwe.
Bhatani: mukati meichi chikamu LR41 yechinyorwa chino yaipinda. Iwo mabhatiri ayo, sekutaurwa kwezita ravo, akaumbwa-bhatani. Ivo anoshandiswa pamidziyo ine yakaderera magetsi kudiwa uye diki saizi, senge mawatch, zvekunzwa zvinobatsira, nezvimwe.
Alkaline: iwo 1.5v mabhatiri, ane macodhi akaita seRR54, LR44, LR43, LR41 uye LR9.
Lithium: kune mamwezve ane ma voltages e3v. Iine hupenyu hwakareba hunoshanda uye unokwanisa kushanda munzvimbo dzakapamhama tembiricha. Aya mabhatiri anoiswa seCR ye lithiamu manganese dioxide uye BR ye lithiamu-polycarbonate monofluoride (lithium thionyl chloride iripo zvakare, kunyangwe iri shoma, ine 3.6v uye nguva yeupenyu inogona kupfuura makore gumi, kune akakosha mashandisirwo uye TL kodhi). Semuenzaniso, iyo CR10, CR1025, CR1216, BR2032, CR2032, nezvimwe. Ose ane madimikira akasiyana.
Sirivha oxide: vanogona kusvika 1.55v uye vane yakanaka kwazvo yakaderera tembiricha kuita. Ivo vanosiyaniswa nematanho eSR, senge SR41, SR55, SR69, nezvimwe.
Masero emhepo-zinc: zvakajairika kwazvo mukubatsira kwekunzwa nekuda kwehukuru hwadzo uye nyore kuiswa. Nemagetsi e1.4 volts. Kodhi yacho ndeyePR, senge PR70, PR41 ...
Kamera Mabhatiri: Ivo vakafanana neakambopfuura, uye kune zvakare ma lithiamu, asi ivo vanowanzouya mumapakeji akakosha eaya madhizaini. Iwo akakura muhukuru, uye anokwanisa kupa voltages kubva pa3 kusvika ku6 volts. Nemakodhi eCR mune ino kesi. Senge CR123A, CR2, 2CR5, CR-V3, nezvimwe.
Seizvo zita rayo rinoratidza, iwo mabhatiri, kunyangwe vazhinji vachiti rechargeable mabhatiri (muchokwadi, vanogona kuve nemhando imwechete uye vachitaridzika semabhatiri asingadzoreke). Aya marudzi emabhatiri haana kuitirwa kushandiswa kamwechete, asi anogona kushandiswa kasingaperi, nemitero yakawanda-yekubuditsa macircle. Kazhinji commons ndeiyi:
Usashandise NiCd kana NiMH charger ye lithiamu mabhatiri, kana zvinopesana. Iyo chaiyo inofanira kushandiswa mune yega yega kesi.
NiCd: Aya mabhatiri e-nickel-cadmium aive nemukurumbira, uye ari kushandiswa zvishoma nezvishoma nekuda kwekurangarira kwavo. Mune mamwe mazwi, kugona kwayo kunodzikira nekushandisa. Vanogona kugara vangangoita 2000 kubhadharisa uye kuburitsa macircuit, chinova chimiro chinoshamisa kwazvo.
NiMH: dzakakurumbira, uye hadzina ndangariro dzakanyanya seidzo dzakapfuura. Uye zvakare, ivo vanotsigira yakakwira simba densities, iri zvakare yakanaka. Ivo vane yavo yakakwira yekuzviburitsa chiyero uye yakaderera yekuchaja kumhanya uchienzaniswa neNiCd. Ivo zvakare vanonyanya kufunga nezvekuchinja kwetembiricha. Ivo vanopedzisira pakati pe500 ne1200 yekuchaja-kuburitsa macircuit.
Li-ion: ndidzo dzinonyanya kushandiswa nhasi kune yavo yakanaka zvivakwa. Ivo vanotsigira yakakwira simba kuwanda kwesero pane NiCd neNiMH, saka ivo vanogona kuvakwa kwazvo compact uye akareruka. Ndangariro yavo yekuita inenge isingakoshese, sezvazvinoita yavo yekuzviburitsa, asi vane poindi dzisina kusimba, nekuti kusimba kwavo hakusvike kuNiCd kutenderera. Mune ino kesi, ivo vari pakati pe400 ne1200 yekuchaja-kuburitsa macircuit.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Zvemagetsi zvigadzirwa » LR41: dzidza zvakawanda nezve aya mabhatiri